Sheekada Brand - Chengdu Xinzi Dharka Roobabka CO., Ltd.
Xinzi Rain waxaa la aasaasay 2004, shirkadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah Chengdu Xinzi Rain Shoes oo la aasaasay 1998 iyo Dharka Xinzi Rain oo la aasaasay 2004.
24 sano oo horumar ah ka dib, waxay noqotay shirkad casri ah oo isku daraysa horumarka, naqshadeynta, wax soo saarka, iibinta, adeegga, soo dejinta iyo dhoofinta Haweenka Dharka.
Shirkaddu waxay siisaa hal mar “Xirashada Dharka” dumarka adduunka oo dhan, taasoo dumarka ka dhigaysa kuwo aad u qurux badan, oo aan mar dambe xidhmin, oo hela isku kalsooni iyo awood dheeraad ah.
Badeecadaha ayaa ku lug lahaa Cidhibtiinii Sare, Kabaha, Isboortiga, Dharka hoostiisa, Lingerie, aan xuduud lahayn iyo naasaha bilaa lacag la’aanta ah, Plus Size Bra & Kooban, iyo qaar ka mid ah oo wata astaanta ay iska leeyihiin.
Iyada oo leh 8000 mitir murabac oo beerta warshadaha ee casriga ah, in ka badan 500 oo shaqaale ah, in ka badan 20 khadadka wax -soo -saarka oo leh R&D leh heer sare oo caalami ah, iyo ku dhawaad ​​30 shatiyada wax soo saarka qaranka.
Xinzi Rain ayaa la guddoonsiiyay maamuusyada shirkad tayo sare leh, ganacsi ilbax ah, shirkad ilaalinaysa deegaanka iyo tobanka nooc ee ugu sarreeya warshadaha nigiska ee Shiinaha.
Raadinta mustaqbalka, Xinzi Rain waxay la jaanqaadi doontaa waqtiyada, sahamin doontaa oo abuuri doontaa, waxayna si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqi doontaa jihada horumarka ee warshadeynta, kala -duwanaanshaha, farsamada, is -habeynta iyo ururinta.
Shop Dukaan hal-joog ah
Research Cilmi baaris madaxbannaan